University Ambo Keessatti WARRAAQSI Barattootaa Itti Fufe! | Biiftuubilisummaa
← Guyyaan Goota Barataan Oromoo Qabsoof Wareegamee Yaadatame
Diddaan Barsiisotaa Finfinee, manneen barnootaa Sadarkaa 1ffaa fi 2ffatti Baldhinaan Itti Fufe . →
University Ambo Keessatti WARRAAQSI Barattootaa Itti Fufe!
Posted on March 13, 2012	by biiftuubilisummaa
Goototni barattootni Oromoo Yunivaristii Amboo Bitootessa 12,2012 nyaataa fi baruumsa dhaabudhaan sochii Warraaqsaa isa lafa sochoose gaggeessaa jiru. Ka’uumsi sochii kanaa jalqaba (ganama jechuudha) qulqullina nyaataa irratti “nyaata cirrachaan guutame hin nyaannu! Cirrachi gara Hidha Abbaayitti yaa ergamu! “ dhaadannoo jedhu kan sababeeffatee eegale yoo ta’u, gara sa’aa boodaa kana immoo jeequmsi kun babal’achudhaan gara gaaffii mirgaa fi dimakiraasii gaafachutti ce’udhaan haalan hammaatee too’annoo waraana mootummaa ala ta’aa akka jiru Sagliin Amboo Odeessa amma bilbilaan nuun gaheen ifa godheera. Gaaffilee ka’aa jiran keessaa:
1. Bulchitootni Yunivaristichaa gubbaa hanga jalaatti dabballoota mootummaatin kan guutaman waan ta’eef bulchiisni dandeettii fi gahuumsaan hojjatu hatattamaan akka bakka nuuf bu’u!
2. Hojjattootni Yunivaristichaa xiqqaa hanga guddaatti malaan maltummaadhaan kan wal hidhanii jiran waan ta’aniif, kanumarraa kan ka’e bajata nyaataaf ramadamu dhuunfaaf oolchanii amma waan nuuf laatan dhabamnaan midhaan cirrachaan qixxee waan nu nyaachisaniif badiin kun har’uma qoratamee bor seeratti akka nuuf dhiyaatan;
Gara sa’aa boodaa kana dubbiin hammaachaa deemnaan gaaffiinis akka armaan gadiitti jajjabaachaa jira jedhama. Kunis:
1. Gaaffin siyaasaa ummanni Oromoo keessayyuu barattootni bara baraa fi yeroo yeroon kaasudhaan wareegama itti kaffalaa jiran itti fufuu waan hin qabneef bara kana dhuma argachuu qaba!
2. ABOn yoomiyyuu kallacha qabsoo Ummata Oromooti! Kana Waan ta’eef kana booda olola isarratti deemu kamiifuu obsa hin qabnu!
3. Gaaffileen kaasne kun hanga deebii quubsaa argatutti hidhamuu fi ajjeefamuurra darbee wareegama kamuu kaffaluuf qophiidha!
Gama mootummaatin tarkaanfiin fudhatamaa jiru yeroof namoota/barattoota/ hedduu qabuuf galmeeffatanii, garuu immoo haalli jiru akka malee kan wareegama guddaa isaan gafaatu waan ta’eef sochiin kun mooraan ala akka hin baanetti mooraa marsanii haaluma ta’aa jiru hordofaa jiru jedhama.
Ummanni magaalichaas ganama irraa eegalee dhimmuma kanarratti mammari’achaa fi gumgummii tokko tokkos dhageessisaa akka jiran barameera.